कल्पजगत- ४ | काव्यालय
कल्पजगत - ४ | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
by श्रीजु सरल July 4, 2020
“कति दिन भयो ?”
“हप्तादिन बढी भइसक्यो हराएको त ! फोनपनि लाग्दैन । कतै गयो कि भनुँ भने कहाँ नै जान्छ र ? उसको आन्द्रा टाँस्सिएझैं मिल्ने साथीसँग त रहेनछ ? अन्त त कसकोमा जाला ? मलाई त डर लागिसक्यो कतै….”
“भयो, भयो । अशुभ नसोच्नुस् । हामी पत्ता लाउने छौँ । बरु उसको मिल्ने साथी को हो ? भेट्न सकिन्छ ?”
“ए… मिलिहाल्छ नि सर । यहीँ नै छ उसको साथी, माथि उसकै कोठामा । भर्खर तपाईं आउनु अघि मात्र त छिरेको ।”
“मलाई लैजानुस् त कोठामा ।”
यो कन्सुत्लेको कोठा जस्तो त देखिँदैन । भन्ने नै हो भने यो कुनै कोठा नै हो जस्तो देखिँदैन । तर यो उसकै कोठा हो । कोठाको रुप यति भग्न छ, हेरिनसक्नुको ! भुइँभरि थरिथरिका रङ्गहरु पोखिएका छन् । फुल्न नपाई झरेका फूलहरुजस्ता । च्यातिएका क्यानभासहरु त्यही रङ्गको लतपतमा हाम फाल्न पुगेका छन् । दराज खुल्ला छ, अनि खाली पनि ! दराजका लुगाहरुपनि भुइँभरि छरपस्ट छन् । कफीको कप, तकिया, किताबहरु, डायरी, क्यामरा, टेबल फ्यान, चित्र कोर्ने कुचीहरु, भित्ते घडी सबै-सबै भुइँमा छन् ।
टेबलमाथि एउटा कप देशी, विदेशी पेनहरु छादेर बेहोस लेटिरहेजस्तो देखिन्छ । टेबलमुनि केही थान टुबोर्ग र रुस्लानका बोतल लडखराएर ढलेजस्ता देखिन्छन् । टेबलको छत्रछायाँभन्दा अल्लि पर भुइँमा एउटा काँचको एस्ट्रे गिदी फुटेर डेट एक्स्पाइर भएको मान्छेजस्तै लडिरहेको छ, आफ्नै खरानीमा रङ्गमङ्गिएर ! यस्तो लाग्छ, यो कुनै कलाकारको नेतृत्वमा युद्धग्रस्त कुरुक्षेत्र हो !
भित्ताभरि रातो, पहेंलो, निलो, हरियो इत्यादी रङ्गले लेखिएका छन्, के हो अब्स्ट्र्याक्ट ? कस्तो हुन्छ ? कसरी भेट्टिन्छ ? कहाँ हुन्छ अब्स्ट्र्याक्ट ? रङ्गहरुको समायोजन, मिलाउन जाने मात्र सुन्दर हुने रहेछ सायद । यतिबेला कन्सुत्लेको कोठा सुन्दर भइकनपनि कुरुप, अराजक देखिइरहेको छ । गायब हुनुअघि कोठाको यो हाल उसले किन गर्यो ? पत्ता लाउन सके धेरै कुरा खुल्ने थियो ।
पूर्वतिरको भित्तामा झ्यालको बगलमै, एउटा ऐना हुने गर्दथ्यो । जब जब तनाव हुन्थ्यो कन्सुत्ले यही ऐनाअघि उभिएर नाच्ने गर्थ्यो । जहाँ यतिबेला कन्सुत्लेकी साथी उभिएकी छ मूर्तिवत ! जसले उसलाई त्यो ठूलो ऐना उपहार दिएकी थिई । तर ऐना त आज भुइँमा चुर-चुर भएर छरिएको छ । ऐना दिने साथीपनि उस्तै चिरा चिरा परेकी हुँदी हो कि ? कोठामा कसैको प्रवेश भएको ऊ चाल पाउँछे । आँसु पुछेर ढोकातर्फ फर्किन्छे ।
“ऊ नै हो, उसकी साथी । सँगै पढ्ने, चित्र बनाउने सबै सँगै गर्थे यिनीहरु । कतै घुम्न जानेबेलापनि यिनीहरु छुटिँदैन थिए । बराबर आउने जाने हुने साथी सर, निकै मिल्ने । तर यसपाली उसलई पनि केही नभनी कता गएछ, गएछ हजुर हाम्रो कन्से !”
केटी घबराएझैं देखिएकी छ । ऊसँग झगडा भएको साँझदेखि नै कन्सुत्ले गायब भएको हो । त्यसैले उसलाई यत्ति थाहा छ कि उसको गायबीको दोषी उही हो । अझ त्यो ऐनाको टुक्रा-टुक्रामा आफ्नो विभक्त अनुहार देखिरहँदा उसले भेउ पाइसकेकी थिई कि उसको ‘कन्से’ उसका कारण कति दुखेको रहेछ, कतिसम्म टुटेको रहेछ ।
“अब रोएर के गर्छेस् ? हामीपनि त रोएका रोएकै छौँ । आँसुले फर्काएन बाबै ! यी भावनाहरुको के नै शक्ति हुँदोरहेछ र ? खोज्नपर्छ अब । सरले के के सोध्नुहुन्छ, सबै भनिदिनु उसले के के कुरा गर्थ्यो, सबै भनिदिनु । सरले मद्दत गर्नसक्नुहुन्छ अनि !”
एउटा क्यानभास उठाएर निकैबेर त्यसमा घोत्लिएपछि प्रहरी प्रश्न गर्छन्, बिना कुनै सम्बोधन, कसैको अनुहार नहेरी ।
“यो छुद्रगोल हेर्दा त लाग्छ उसको कसैसँग चर्कै झगडा परेको हुनुपर्छ । कोसँग परेको थियो ?”
प्रश्न कसलाई हो र कसले उत्तर दिनुपर्ने हो ? नबुझेर वातावरणमा एकैछिन चकमन्न छाउँछ । प्रहरी पुनः दोहोर्याउँछन् आफ्नो प्रश्न; “कसैसँग झगडा परेको थिएन ?”
केटीको मानौँ ओठ तालु सुक्छ । खस्रो जिब्रोमा उसको वाक्य घिस्रिन मान्दैन । बल गर्दापनि वाक्य किलकिलेमा अड्किरहेको छ । एक्कासि फ्याट्ट रुन्चे आवाज आउँछ,
“घर छोडेर गएको बिहानै मात्र हो हजुर, थोरै तर्क वितर्क चलेको थियो । सधैँजसो नै हुन्थ्यो हुनलाई । तर त्यो दिन अलि चर्कै भएछ क्या हो । फुत्त निस्केर हिँडिर’थ्यो के मन बनाएर फर्केछ कुन्नि, त्यसपछि यो सबै सामान छरछार पारेछ र हिँडेछ । के सोचेर हिँडेको हो, कहाँ जान्छु, के गर्छु सोचेर हिँडेको हो ? अहिलेसम्म न मान्छे फर्कियो न कुनै खबर छ हजुर, गायब भयो । सबै मेरै कारण हो हजुर, मेरै कारण !”
“मैलेपनि कराइदिएकी थिएँ, ‘बिरामी बाबुसँग मुखमुखै लाग्छस्’ भनेर”
सुन्दा यस्तो लाग्छ कि यहाँ सबैजना आफैलाई दोषी ठानिरहेका छन् ।
“के थियो झगडाको कारण ?”
“कारण त के बताऊँ हजुर, आफू रोगी भएँ । रोगी भएकै कारण मैले जागिर चाँडै छोड्न पर्यो । डेढ वर्ष मात्रै बाँकी थियो । पेन्सनको लागि । तर सकेन ज्यानले । छोरोलेपनि भन्न लाग्यो, पैसाभन्दा ज्यान ठूलो हो । म छु नि बाउ, म गर्छु अब भन्थ्यो । होला नि त भनेर पेलिनँ मैले हजुर ज्यानलाई । तर आज कमाई छैन, गरिबी छ । यो दुई तले घर हजुर । एक फल्याट भाडामा लगाएर कति नै पो आउँछ ? हामी दुई ज्यान, सन्तान दुई ज्यान । ठूलीको त दुःखसुख विहावारी गरी पठाइयो, उसलाई सुबिस्तै छ, उसको पिर छैन । तर हामी ४ ज्यानलाई यही कोठाभाडाले खानपनि पुर्याउन छोड्यो । उः बहिनीको परिक्षा आउनै आँट्यो केरे, ११ को…”
“११ होइन, बाह्रको चाहिँ”
“ए, अँ.. बाह्रको हो के’रे परिक्षा आउन आँट्यो बहिनीचाहिँको । आर्थिक छैन हेर्नुस्। कसोगरी परिक्षा लेख्न लाउने हो छोरीलाई, पिरले खान्छ म बूढोलाई । उसलाई वास्ता छैन । त्यतिबेला, बेला हुँदै नोकरी लाग्ने विषय पढ् भनेको सुनेन । खर्च त लाग्यो यसमापनि तर लगानी नै नउठ्ने, खाली खेल्नलाई मात्र ठिक्क विषय के रोजेछ, रोजेछ यस्तो ! उतिबेला त भन्थ्यो, ‘बाउ पिर नगर्नु यसमापनि भविष्य छ । एउटा चित्र बेचेर लाखौँपनि कमाएका छन् मान्छेले’ भन्थ्यो । लौ त रोजाई कै पढोस् राम्रै हुन्छ भनेर हामी चुप लाग्यौँ । तर यो के विषय पढ्यो पढ्यो हजुर ! पढ्यो कि खेल्यो भनौँ खै ? के गर्यो गर्यो, आफू त बिग्र्यो बिग्र्यो, बहिनीलाई पनि बिगार्ने भयो । अलिकति जिम्मेवारी काँधमा बोक भनेर सम्झाउन बुझाउन के खोजेको थिएँ, घर छोडेर हिँडिदियो हजुर । के मोहनी हुनेरहेछ यी रङ्गहरुमा ? के विषाद हुँदोरहेछ ? बिगारेरै छोड्यो हजुर, बर्बाद बनायो । इः अहिले अब छोरो नै छैन । कहाँ खोज्न जाने ? सक्ने भा’ त जाँदोपनि हुँ, सक्दिनँ ! के गरूँ हजुर म ?”
एकैछिन रुवाबासी चल्छ । उनीहरुको मण्डली ‘को सही को गलत’को फैसला गर्न बसेको होइन । च्यातेर मिल्काइएका सम्पूर्ण क्यानभासको मगजी पोस्ट मार्टम गरी हेर्दा, कुनैपनि चित्रहरुमा कसैको अनुहार पाइएन । बाबु, आमा, दिदी, बहिनी, साथी-भाइ, ऊ आफ्नै, अहँ कसैको पनि अनुहार ती डेड क्यानभाससँग मिलेन । चित्रहरु सुन्दर त छन् तर तिनमा कुनै निश्चित आकृति या भनुँ दृश्य त्यस्तो केही देखिएन । प्रहरीलाई कुरा बुझ्न अब यो चिम्सी केटी, जो मिस्टर गायब अर्थात् कन्सुत्लेकी आन्द्रा टाँस्सिएसरी निकटकी साथी छे, उसको साहारा नलिई धर छैन । यसपटक प्रहरीले उसैलाई तोकेर सोध्छन्,
“तपाईंलाई त पक्कै थाहा होला, उसले यी चित्रहरु फ्याँक्नुको कारण के हो ? अक्सर मान्छे, साथीसँग बढी खुलेर कुरा गर्न सक्छन्।”
सम्हालिँदै, शब्दहरु जोख्दै केटी जबाफिन थाल्छे । ऊ ठूलो धर्म सङ्कटमा छे । उसलाई आफूपनि बच्नु छ र साथीलाई पनि बचाउनु छ ।
“त्यो दिन ऊ मकहाँ आएको थियो । घरमा झगडा पर्यो जसरीपनि चित्रकलाबाटै केही गर्नु छ, हामी दुईजना मिलेर एउटा ग्यालरी शप खोलौँ नत्र अनलाइन बेचौँ भन्थ्यो….”
बोल्दाबोल्दै उसका शब्दहरु उल्टो बग्न थाल्छन् । उसलाई भाउन्न छुट्छ । ऊ रुन थाल्छे ।
“त्यसपछि, तैँले के भनिस् ?” आमा जान्न उत्सुक देखिन्छे ।
“भन्दै त थिएँ, यही एकथोक बाहेक उसले केही देख्दैन । मेरो छोरोलाई यही रङ्गले बिगार्यो, मोहनी गर्यो । यही चित्रकारीले आज यस्तो गराइदियो ।” बाबुचाहिँलाई निर्णय गर्न हतार हुन्छ ।
“एकछिन एकछिन” प्रहरीले केहीबेर उसलाई रुने समय दिए । रुने अप्रत्यक्ष अनुमति पाएको अनुभूति मिलेपछि केटीले रुन बन्द गरी । स्याँक्क सुँक्क गर्दै आफूलाई पुनः सम्हालिन्छे र भन्न लाग्छे,
“मैले भनेँ, ‘हामी दुईको चित्रले मात्र भेराइटी पुग्दैन । एक किसिमको चित्र राखेपछि मान्छेले अनेकथरीको चित्र खोज्छन् । फेरि हाम्रा चित्रहरु बेच्ने सकिने गरी योग्यपनि भइसकेका छैनन् । हामी प्रोफेशनल भइसकेका छैनौँ, हामी अझैपनि यसलाई खेलजत्तिकै नै लिइरहेका छौँ । अझै खारिन बाँकी छ । यस्तै यस्तै के के भनेँ मैले । अनि ऊ त्यसै तातेर आएको मान्छे झन् तात्न थालेछ ।”
यति भनेर ऊ रोकिन्छे । सोच्छे सायद, कसलाई बचाऊँ, आफैलाई ? या आफ्नोलाई ?
प्रहरी उसको उत्तर सुनेर उत्तर भित्तातर्फ अघि बढ्छन्, जहाँ भित्ता रङ्गमङ्गिएको छ प्रश्न नै प्रश्नले । ऊ पुनः भन्छे,
“मलाई लाग्थ्यो, म उसलाई सम्झाइरहेकी छु तर म त वास्तवमा ऊभित्रको लाभालाई पो बाहिर निकाल्दै रहिछु ।”
ऊ फेरि रुन लाग्छे । तर यसपटक त्यसपछि के भयो कसैले सोध्नुअघि ऊ आफै भन्न लागि रून नछोडेरै,
“त्यसपछि ऊ पड्किन थाल्यो । मैले कहिल्यै उसको त्यसप्रकारको रुप देखेकी थिइनँ । कलेजमा हुँदा उसको चित्रकलाको कमजोरी औंल्याएर धेरैले धेरैथरी टिप्पणी गर्थे । मात्र म एउटी थिएँ जो उसको लागि उसको पक्षमा बोल्ने गर्थेँ । ऊ मान्छे राम्रो थियो, कसैलाई नराम्रो नगर्ने, कसैको नराम्रो नचिताउने । त्यस्तो मान्छे देखेरपनि, मैले उसको सबैले मजाक उडाएको हेरिरहन सकिनँ । सबैले उसको चित्रको खिस्सी गरिदिँदा उसको मनोबल एकदम गिरेको हुन्थ्यो, उसको मुहार नै लट्केको हुन्थ्यो । अनि म उसलाई ढाडस दिन्थेँ कि उसको भन्दा राम्रो कसैले बनाउँदैन चित्र । उसको कुचीमा, रङ्गमा जादु छ । टेक्निकहरु प्रयोग गरेर ऊ नयाँ नयाँ चित्र बनाइरहन्थ्यो । जब कि, सिकुञ्जेल मात्र टेक्निक प्रयोग गरेर बिस्तारै आफ्नै किसिमको, कल्पनाको, मौलिक, कलात्मक, बिम्बात्मक चित्रहरु बनाउनु पर्नेमा उसले छिटो-छरितो टेक्निक युज गर्नमा नै मज्जा लिन थाल्यो । गल्ती मेरोपनि छ, सुरुमै उसलाई ढाडस नदिएर, ठीकठिक कुरा भन्न सकेको भए हुनेरहेछ । त्यसदिन अचानक, हाम्रो चित्रहरु स्तरीय छैनन् भन्दा उसले सहनै सकेन । अरुले भनेको भएपनि सहन्थ्यो होला तर मैले भनिदिएँ उसले सहनभन्दा पनि विश्वास गर्न सकेन । त्यसैको रन्कोमा उसले मलाई दिनुसम्म गाली दियो । झुट्टी, स्वार्थी, कपटी के के हो के के अरुपनि !”
“अनि के भो ?” आमाको मन जति जिञ्जासु कसैको मन हुँदैन सायद ।
“मेरो नकारात्मक कुनै सोचाइ थिएन उसप्रति, तर उसैले मलाई त्यसरी गलत बुझिदिएर अनेकथरी गाली गरिदिएपछि, मपनि आवेशबाट बाहिर आइपुगेछु । मैलेपनि उसलाई सबै भनिदिएँ, जस्ताको त्यस्तै जुन मैले अघिपनि सुनाएँ तपाईंहरुलाई । मैले त्यहिबेला आफ्नो हद नाघिदिएछु । तर मलाई त्यतिबेला रोक्ने को ? हो, मैले उसलाई भनिदिएँ, ‘तँलाई अब्स्ट्र्याक्टको ‘अ’ मात्रपनि आएको भए अहिले मेरो भावनाको यसरी बेइज्जत गर्ने थिइनस् । तेरो लागि हुँदै होइन यो अब्स्ट्र्याक्ट आर्ट ! ठिक भन्नुभएछ तेरो बाबाले, आजसम्म तैँले पढ्ने, सिक्ने होइन मात्रै खेल्ने काम गरिस् । क्विक टेक्निक नै सिकेर कोर्नु थियो चित्र भने युटुबमै पढेको भए हुन्थ्यो । बाबाममीको पैसा किन उडाइस्, कलेज भर्ना भएर ? के के मात्र भनिनँ । रङ्ग फ्याँक्ने १०० तरिका जानेर मात्रै जानिँदैन अब्स्ट्र्याक्ट । तैँले सोचेजस्तो र गर्नेजस्तो सतही हुँदैन अब्स्ट्र्याक्ट आर्ट भनेको, मनको गहिराईमा पुगेर झिक्न सक्नुपर्छ बाहिर । यस्तै यस्तै के के भनेँ भनेँ सर । यो सबै मेरै कारणले हो । उसलाई तलमाथि केही भइहाल्यो भने मलाई नै सजाय दिनुस् सर । मै हुँ दोषी ! मै हुँ….”
मनको सबै कुरा बताइसकेपछि ऊ अलि कम रुन थाल्छे ।
“कहाँ गएको हुन सक्छ ऊ, थाहा छ ?”
“थाहा छैन सर । रिसाएर हिँडेको हो ! यहाँ-वहाँ केही नभनी ।”
“ऊ निराश हुँदा प्राय कहाँ जाने गर्थ्यो ?”
“पाटनको कृष्ण मन्दिर !”
“त्यहाँ गयो होला त ? आठ दिनसम्म त्यहीँ होला ?”
“गयो होला जान त । तर आठै दिनसम्म त एकै ठाउँ कहाँ बस्न सक्थ्यो ?”
“अरु कोही मिल्ने साथीभाइ, आफन्त ?”
“उसको सबैभन्दा मिल्ने नै मै थिएँ । मैबाट धोका पाएको महसुस बोकेर ऊ अरु कुन साथीकहाँ जान सक्दो हो र ?”
“कुनै फोन सम्पर्क, केही ?”
“छैन, फोन नै अफ गरेको रहेछ, कोसिस त गरेको गरेकै छु । दिनमा १००० बार !”
सबैकुरा सुनिसकेपछि आमा र बाबु एकातिर रुन थाल्छन् । ती रुन थालेपछि सम्हालिएकी केटी पुनः रुन थाल्छे । प्रहरीलाई फोन आउँछ । कुनै इमर्जेन्सी खबर आइपुगेपछि प्रहरी त्यहाँबाट हतार हतारले निस्किन्छन् ।
“केही थाहा लागे फोन गर्नुस्, हामीपनि गर्ने नै छौँ । हस् त बस्नुस्, रोएर समाधान निस्किँदैन, नरुनुस् ।”
कन्सुत्ले यतिबेला अस्पतालमा छ । निमोनियाको चरम स्थितिमा पुगिसकेको छ ऊ । कल्पनगरको स्वप्नसरिता नदीमा स्थानियले फेला पारेर पहिला अस्पताल भर्ना र त्यसपछि प्रहरी चौकीमा खबर गरेका हुन् । हराएका र फेला परेकाहरुको सुचीबाट हुलिया मिलाउँदै जाँदा कन्सुत्ले फेला परेको हो । पछाडि फ्याँक्दा गर्धनसम्म खस्ने, कालो कपाल, गहुँगोरो वर्ण, दायाँ आँखाभन्दा मुनि गालाको माथ्लो डाँडोमा कालो कोठी, कालै हुनखोजेका पातला ओठ, एकातिर मात्र छेडिएको कान, ५ फिट ६ इन्चको हट्टाकट्टा ज्यान । कन्सुत्लेको होस् आएपनि उसको अवस्था नाजुक नै हुँदा कसैलाई भेट्न दिइएको छैन । आमाचाहिँ डाक्टरसँग हार-गुहार गरिरहेकी छ ।
“डाक्टर, मेरो बाबुलाई ठिक त हुन्छ नि होइन ?”
“हेर्नुस् अवस्था नाजुक छ । निमोनिया बिग्रिएको स्थिति छ । सक्दो प्रयास त हामीले गरिरहेका छौँ ।”
“डाक्टर, त्यसो नभन्नुस् । एउटै छोरो डाक्टर सा’ब मेरो, त्यसलाई जसैगरी बचाइदिनुस् बिन्ती डाक्टर सा’ब !”
“हामी बुझ्छौँ तपाईंहरुको पीडा । भर्खर होस् खुलेको छ अब केही समय धैर्य गर्नुस् । स्वास्थ्य अवस्था के कसो छ, फेरि जाँच हुँदैछ, रिपोर्ट आउन दिनुस् ।”
यी चारजना मध्य बाबु र उसकी साथी, यो सब हुनुमा यी दुईलाई सबसे ज्यादा दोषबोध छ तर ज्यादा रुने यी दुई नभएर बरु उसकी आमा र बहिनी हो । उसलाई सबैभन्दा धेरै अँगालोमा टाँस्ने उसकी आमा हो र उसले सबैभन्दा धेरै अँगालोमा टाँसेको उसकी बहिनीलाई हो ! आँसु र अँगालोबिच कस्तो सामञ्जस्य ? खैर, यी चारैजना लगभग हतोत्साही भइसकेका छन् । उत्तिकै अनुहार लट्काएर यी सबै अस्पतालमा मृत्यु र जीवनको पञ्जा-लडाइँ हेर्न आइपुगेका छन् । एउटा अमूर्त खेल ! अमूर्तता ! आकारविहीनता ! कस्तो हुन्छ आकारविहीनता ? जिन्दगीको त आकार हुने रहेछ । जन्मदेखि मृत्युसम्म उथुलपथुल हुँदै दौडिने रेखा नै त रहेछ जिन्दगी ! मुटुको पनि त गति हुँदोरहेछ । उचो निचो हुँदै कुद्दारहेछन् मुटुका रेखाहरु । अमूर्त नै के रहेछ र ? यो कतै नभएको अमूर्तता कहाँ भेटिन्छ ? संसारमै नभएको अमूर्तता कहाँ भेटिन्छ ? आकारविहीनतालाई आकारमै कसरी उतार्ने ?
“तपाईंहरु अब भेट्न जान सक्नुहुन्छ । तर एकपटकमा एकजना मात्र गइदिनुस् ।” डाक्टरको आवाजले सबैजना झस्किन्छन् ।
“डाक्टर, कस्तो छ अहिले मेरो बाबुलाई ?”
“खासै अवस्थामा सुधार छैन । अहिलेसम्म औषधीले बचाइराखेको छ । अब त्योपनि सम्भव छैन ।”
“त्यसो नभन्नुस् डाक्टर सा’ब, त्यसो नभन्नोस्…”
“हामीले सक्दो कोसिस गरेका हौँ । अब धेरै समय छैन । यस्तो केसमा अक्सर, १० मा २ जना मात्र बाँच्न सफल हुने गरेका छन् । अझ तपाईंको बिरामी शराबी हुनुहुँदो रहेछ । यस्तो चिसो मौसममा, अझ रातभर, खोला किनारमा, त्योपनि मदिरा पिएर माटो र पानीको बिस्तरा हालेर ! यो एकदमै कृटिकल केस हो । फेरि बिरामीमा बाँच्छु भन्ने आत्मबल नै छैन । आफूलाई दह्रो बनाउनुस् । सक्दो हामीले गरेका हौँ, गरिरहेका छौँ । यही हुन्छ भनेको त होइन । तर के हुन्छ भन्न सकिन्न । जे भएपनि सहने हिम्मत राख्नुस्, आफूलाई दह्रो बनाउनुस् ।”
कन्सुत्ले, अस्पतालको शैय्यामा छ । कहाँ जान्छु सोचेर ऊ हिँडिदिएको थियो ? के ऊ आफूले सोचिरहेकै बाटोतर्फ जाँदै छ त ? उसले पुग्न खोजेको त्यहीँ हो त ? अन्तिम बिसौनी ? आँखा मजाले उघार्न नसकेपनि उसका कान चंख छन् । बिरामी भइरहँदा पनि कन्सुत्लेका कान बिरामीजस्ता छैनन् । बरु अझ सक्रिय भएका छन् । मानौँ, शरीरका सबै अङ्गको शक्तिनै उसको कानमा आइपुगेर सञ्चय भएको छ । के यस्तो हुन सक्दैन र ? हुन सकोस् नसकोस्, ऊ बस् आफ्नो मनगढन्ते कुरालाई मान्यता दिन चुक्ने छैन । उसले डाक्टर र नर्सबिचका कुराहरु सब सुनिसकेको छ । तर उसलाई विश्वास भइरहेको छैन कि ऊ साच्चै जाँदै छ । उसको अन्तिम इच्छा कसैले सोधिदिएपनि हुनेझैं लागेको छ उसलाई । त्यसोभएमा ऊ भन्ने थियो, ‘अमूर्त जानेर मात्रै मर्न पाऊँ’ !
ऊ गाइँगुइँ सुन्छ आफ्नो बारेमा, कि अब ऊसँग अति थोरै मात्र समय बाँकी छ । सुनेर ऊ मुसुक्क मुस्कुराउँछ । सोच्छ, ‘समय त मैले आफैसँग बोकेको रहेछु । केही समय अझै बाँकी रहेछ र त्यो समय मैसँग रहेछ ।’ आज उसलाई अजीव अजीव विचारहरु आइरहेछन् । उसको संवेगपनि मानौँ आज बहुलाएको छ, रुनुपर्ने कुरामा हाँसिरहेको छ, रिसाउनुपर्ने कुरामा त झन् जोडले हाँसिरहेको छ । हाँस्नैपर्ने कुरा त उसलाई यो लागिरहेछ कि मर्नै लागेको मान्छेले अन्तिम घडीमा यस्ता कुराहरु सोचिबसेको छ ।
हाँस्दाहाँस्दै कोही उसलाई बिथोल्न आइपुग्छ । चकमन्न रात भएपनि केशको बासले नै ऊ चिन्छ चिम्सीलाई । जसलाई ऊ बेहद प्रेम गर्छ तर आजसम्म भन्न पाएको छैन, यो अन्तिम अवस्थासम्मपनि । चिम्सी उसलाई सोध्छे,
“केही भन्न मन छ ?”
“म मरे भने नरो !”
“तँ मर्छस् र यति चाँडै ?”
“मर्न त मन छैन”
“के गर्न मन छ ?”
यतिबेला पनि उसका काला ओठ काँप्छन् । अर्कैथोक भनिदिन्छ,
“सु गर्न मन छ ।”
“तेरो जिस्किने बानी !”
“आइ एम सिरियस !”
“त्यसैले त हस्पिटलमा छस् ।”
“मलाई यहाँ हुन मन छैन ।”
“कहाँ हुन मन छ ?”
फेरिपनि डरैले उसले मौका गुमाउँछ । भन्छ,
“साच्चै पिसाब च्यापेको ?”
“पाइप होला त, गर्दे न । किन ट्वाइलेट जान पर्यो ?”
“जिन्दगीमा एउटा बदमाशी त गरेर मर्न दे । एउटा नियम त तोडेर मरूँ ।”
“तँ छेस् नि साथमा ।”
“ब्ल्याकमेल नगर् ।”
ट्वाइलेटतर्फ जाँदै गर्दा चिम्सी सोध्छे,
“एक्लै छिर्न सक्छस् ?”
“तँ आउँदिनस् ?”
“डरले मर्छु भन न सिधै ।”
“च्यालेन्ज गरेकी ?”
“सकेँ भने के दिन्छेस् ?”
“के माग्छस् ?”
“तैँले दिन नसक्ने जे भएपनि दे ।”
“त्यसोभए केहीपनि पाइनस् ।”
कन्सुत्ले ट्वाइलेट छिर्छ । पाइपबाट फेर्दा फेरेजस्तै नलागेको पिसाबलाई ऊ खुब सम्झिरहेको रहेछ । जिन्दगीमा वास्तै नगरिएका कुराहरुपनि कति महत्वपूर्ण हुँदा रहेछन् । नाथे, पिसाब त प्रत्यक्ष प्राकृतिक ढङ्ग/अङ्गले फेर्न नपाउँदा यतिबिघ्न नियास्रो लाग्ने रहेछ । कन्सुत्ले मुत्र विसर्जन गर्न थाल्छ । अचानक उसलाई वेग्लै महसुस हुन्छ । पिसाबबाट आइरहेको तातो तातो बाफलाई देखेर ऊ चकित हुन्छ । चिसोले निधारमा मृत्यु लेखिछोडेको मान्छेको शरीरबाट पिसाबसँगै यो न्यानो मिल्किरहेछ । यतिबेला ऊ चिसोले मर्दै छ जब कि तातो उसकै शरीरभित्र रहेछ र जो खेर गइरहेछ । उसलाई लाग्यो जीवन हामीभित्रै हुँदो रहेछ । हामीले सदुपयोग गर्न नजानेरै यो खेर गइरहेछ । सायद जीवन नजुधेर मृत्युसँग पलायनको बाटो रोज्दै छ । नाथे पिसाब फेर्दापनि यस्तो अनुभूति ? पिसाबमा उसले आज जीवन उडिरहेको देख्यो । उसले यसअघि यस्तो अद्भुत अनुभूति कहिल्ये गरेको थिएन ।
ट्वाइलेटबाट बाहिर निस्केर चिम्सीलाई शानसँग भन्छ,
“देखिस् ? सक्दिनँ भन्थिस् नि ?”
‘माग न त के माग्छस् ।”
“साच्चै दिन्छेस् नि ?”
“खुरुखरु भन्, के चाहियो ?”
“मलाई क्यानभास, रङ्ग र कुची ल्याइदे । म चित्र बनाउँछु ।”
“बस् ? यत्ति ?”
भोलिपल्ट बिहान चिम्सी खाना र उसले मगाएका सामानहरु लिएर आइपुग्छे । खाना खाएर कन्सुत्ले चित्र बनाउन थाल्छ । उसलाई अस्पतालको वातावरणले केही अवरोध गरेन । उसलाई आज डाक्टर, नर्स, आमा, बुवा, बहिनी, दिदी, को को आए, को को गए केही याद छैन । ऊ यति तल्लिन छ कि चित्रमा मानौँ चिम्सीले उसलाई भनिदिएकी होस्, ‘एउटा बिक्न योग्य चित्र बनाएर देखाइस् भने कन्सुत्ले बाहुन यो राई केटी तेरी भई’ ! बिहानदेखि थालेको चित्र अर्को बिहान हुँदा उसले भर्खरै के सिध्याउँछ, पल्लो बेडको बिरामीले उसलाई सोध्छ, “बेच्नुहुन्छ ?”
ऊ भाउ खाँदै भन्छ, “यो त आफ्नै लागि कोरेको हुँ ।”
“प्लिज, मेरो लागि पनि बनाइदिनुस् न अर्को एउटा । म किन्छु ।”
“ठिक छ, पर्खनुस् । म ट्वाइलेट गएर आऊँ, अनि कोर्न थाल्नेछु ।”
क्यानभास र कुची बिसाएर कन्सुत्ले फटाकसे उठेर ट्वाइलेटतिर लाग्छ । पिसाबबाट उडेको जीवन नियाल्दै ट्वाइलेटभित्रै चिच्याउँछ,
“अमूर्त छ त्यहीँ, छ मूर्त जहाँ !
बस् उघार तेस्रो, खै आँखा कहाँ ?”
Literature and Art Lover !